पाथिभरा माताले सबैको मनो कांक्षा गरुन, असार २१ गते आइतबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/पाथिभरा माताले सबैको मनो कांक्षा गरुन, असार २१ गते आइतबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
पाथिभरा माताले सबैको मनो कांक्षा गरुन, असार २१ गते आइतबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
आज श्री शाके १९४२ बि.स.२०७७ साल असार २१ गते आइतबार इश्वी सन २०२० जुलाई ५ तारीख आषाढ शुक्लपक्ष पूर्णिमा तिथी पूर्वाषाढा नक्षत्र ऐन्द्र योग वव करण चन्द्रंमा धनु राशिमा आनन्दादि योगमा शुभ योग प्रमादीनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु गुरु`पूर्णिमा, गुरु व्यास जयन्ती, दक्षिणामूर्ति पूजा, दिल्ला पुन्ही, मानस व्रत प्रारम्भ, भक्तपुरमा वीरनदी स्नान (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) परिवारको मार्गदशर्न नमान्दा कार्यको क्षेत्रमा अपजस खेप्नु पर्नेछ । नयाँ मित्रहरु सगँ को भेट घाटमा सामान्य यात्रा तथा खर्च हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । अचल सम्पतीमा ह्रास आउनाले कामको क्षेत्रमा समान्य ढि`लाई रहन सक्छ । मान्यजनको साथ छुट्नाले सामान्य चिन्ता सहनु पर्ला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) आम्दानि मध्यम रहेता पनि बोलिको कारण साधारण दुर्घटनाको सम्भाबना रहेको छ । नजिकका ब्यक्तिहरुको साथ छुट्नाले सहकार्यमा झन्झट ब्यर्होनु पर्नेछ । कुनै पनि निर्णय हतासमा नगरैकै बेश हुनेछ । दाजुभाई बिच मनमुटाब रहन सक्ला । कामको क्षेत्रबाट सामान्य झन्जट ब्यर्होनु पर्ला । मालसामान हराउन सक्ला ।
मिथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) जीबन साथीको सहयोगले गरिएको ब्यापार ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ । बोलिको प्रभुत्वले मानसम्मानको प्राप्ति हुनेछ । मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीएका कार्यहरु सजिलै पुर्ण हुनेछन । बोलिको प्रभाबको कारण मान्यजन को साथ पाईनेछ । कार्य सम्पादनका क्षेत्रमा सावधानि साथै गोप्यता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) आफु भन्दा सानाको सहयोगमा गरिएको कार्यहरु सफल रहनेछन । बौधिक ब्यक्तित्व सगँको सामिप्यता आगामी दिनलाई मार्गदर्शन बन्नेछ । मातृ पक्षको स्वास्थमा देखापरेको असरले सामान्य समस्या पैदा गर्न सक्नेछ । गरिरहेको काममा त्यती मन नलाग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ । ब्यापार ब्यबसायमा रामा्रे समय रहेको छ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) सामान्य कठिनाई पश्चात मनग्य आम्दानीका स्रोतहरु फेला पर्नाले मन उत्साहित रहनेछ । पारीवारिक झोरझमेलाको फन्दामा परिनाले दिन निरासा पुर्ण रहला । कार्य क्षेत्रमा लगाईको श्रमको उचित मुल्यांकन हुनेछ । मान्यजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुन सक्नेछ । गरीरहेका कार्य सम्पादनमा निकै संघर्ष गर्नु पर्नेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) स्वास्थमा आएको खराबिले कार्यमा ढिलाई उत्पन्न गराउनेछ ।सन्तान सम्बन्धी समस्याले सताउला । अरुको अनुशरणले तपाईलाई समान्य झन्झट वा अपजस दिलाउन सक्नेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । दम्पति बिच सामान्य मनमुटाब रहला । बाणी तथा स्वास्थ क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) जिबन साथीको सहयोगले ब्यापार ब्यवसायमा सुधार आउनेछ । जिद्यी स्वभाब तथा अरुले देखाएको बाटो अनुशरण नगर्नाले सामान्य दुर्घटना निम्त्याउला । सबारी साधनको प्रयोगमा ध्यान दिनु होला । सहि निर्णय हुन नसक्दा परिबारीक कलहको सामाना गनुपर्नेछ । यापार ब्यवसायमा समय खर्चिदा उत्तम रहनेछ ।
आज शनिबार सच्चा मनले भगवानको दर्शन गर्दै राशिफल पढ्नुहोस !!
पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, ज्येष्ठ २२ गते बिहिबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
“पाथिभरा माताले सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन, श्रावण ३१ गते शनिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल!”
पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, ज्येष्ठ २६ गते सोमबार, आज तपाइको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल !
चाँडै प्रेममा पर्छन् यी ५ राशिका व्यक्ति